Amerika Latina sy Espana: Tetikasa Blockchain miaraka amin'ny Cryptocurrencies | Avy amin'ny Linux
Cryptocurrency avy any Espana sy Amerika Latina
Raha ny fanadihadiana navoaka vao haingana mitondra ny lohateny hoe Fandinihana Benchmarking Global Cryptocurrency tarihin'i Dr. Garrick Hileman sy Michael Rauchs, mpikaroka avy ao amin'ny Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF), Bitcoin no cryptocurrency ekena eran'izao tontolo izao an'ny orinasa roa, olona, ​​mpitrandraka, valizy ary trano fifanakalozana; Na izany aza, ny altcoin dia misolo tena safidy matanjaka izay mampiseho fitomboan'ny fampiasana azy ireo, ny vidiny ary ny fanekeny.
Maherin'ny 1600 ny vola crypto azo antoka sy azo ovaina azo isaina manerantany amin'ny trano fifanakalozana lehibe sy ny tsenan'ny crypto fananana eto an-tany, ny maha Espana sy Amerika Latina 2 tsena mety mitombo eo amin'ny sehatry ny crypto fananana sy cryptocurrency. Amin'ity boky ity dia hitrandrahana ireo vola crypto fanta-daza indrindra any Espana sy Amerika Latina izahay mba handinihana tsara ny toe-draharaha ankehitriny.
2 Lisitry ny Cryptocurrencies
4.1.1 Jasper vola madinika:
4.1.2 tsara indrindra:
4.4.1 Tsaramaso maintso:
Ity vanim-potoana FinTech vaovao ity nipoitra tsikelikely tamin'ny nahaterahan'ny Blockchain Technology (Blockchain) teo amin'izao tontolo izao, tamin'ny 2.009 niaraka tamin'ny fananganana Bitcoin, Izany dia nahatonga ny fisongadinana sy ny fitomboan'ny fisondrotan'ny hetsika ho an'ny daholobe sy ny tsy miankina, ny olom-pirenena ary ny varotra, eo amin'ny sehatry ny entana sy serivisy. miaraka amin'ny fampiasana marika, fananana crypto ary crypto, manerantany, ny maha-Espana ahy sy ny faritra Amerika Latina dia ohatra tsara amin'izy ireo.
Izany rehetra izany dia vokatry ny fisarihana ny loham-piankohonana, izany hoe ny fanapariaham-pahefana azy ireo, izay any amin'ny faritra toa an'i Amerika Latina dia mamela endrika harena vaovao izay tsy voafehy, voafetra na sakanan'ny firenena manokana, governemanta na orinasam-panjakana amin'ny banky na tsy miankina.
Azo antoka fa ny sasany amin'izy ireo tato ho ato, dia noforonin'ny governemanta na andrim-panjakana tsy miankina na olon-tsotra miaraka amin'ny fanohanan'ny hery tsy miankina na andrim-pirenena, ary ny sasany aza noforonina mba hamidy ho an'ny mpihaino manokana.
Lisitry ny Cryptocurrencies
Ny fohy famintinana ireo trangam-bola crypto fantatra indrindra sy azo antoka aseho etsy ambany, amin'ny abidia abidia ary atambatra amin'ny firenena niaviany, dia santionany kely fotsiny amin'ireo sasany amin'izao fotoana izao noforonina ho an'ny tanjona samihafa, toy ny: Mampiroborobo ny toekarem-pirenena na ny toekarena tsy miankina, ny haavony ary ampitomboina ny toe-karena-toekarena amin'ireo tanàna na vondrom-piarahamonina mitantana azy ireo, manohana ny fampandrosoana ireo hetsika ho an'ny daholobe na manokana, na manatratra fananganana teknolojia vaovao eo an-toerana.
Y Na dia tsy ny cryptocurrency aza ny panacea na ny vahaolana maharitra hanamboarana ny toekaren'ny firenena amerikanina latina, ohatra, ary mety hanohy hitady fameperana na fanakantsakanana ataon'ny governemanta na tsy miankina amin'ny firenena sasany amin'ny fahazoana azy maimaimpoana, Ireo dia hitohy ho fomba haingana hanatsarana ny kalitaon'ny fiainany sy hivelomana amin'ny toe-karena, antonony na henjana, isaky ny firenena ao amin'ny faritra.
Betsaka ny tetik'asa izay tanterahina any Espana sy Amerika Latina ankehitriny ary maro no eo am-pamokarana, ary tsy amin'ny sehatra toa ny fampiasam-bola amin'ny haitao na fotodrafitrasa ihany, fa ny fizahantany, fanabeazana ary fitantanana governemanta. Ohatra, toy ny amin'ny:
Namboarina tamin'ny Bitcoin sy Litecoin fa nifantoka tamin'ny sahan'ny Espaniôla sy ny fitrandrahana iraisana. Hijery misimisy kokoa momba azy ao Coinmarketcap.
Cryptotret Gastronomika natao manokana hampiroboroboana an'i Nostrum, ilay rojom-pisakafoanana alain'ny Espaniola. Tsy mbola ao amin'ny Coinmarketcap io.
Cryptocurrency izay mampanantena ny hamoahana ny demokrasia amin'ny alàlan'ny algorithm 'porofon'ny marimaritra iraisana' sy ny prototype ny fitrandrahana azy, antsoina hoe Jaspberry. Tsy mbola ao amin'ny Coinmarketcap io.
Cryptocurrency (Token ERC-20) dia noforonina mba hivarotra sy hampiasa vola amin'ny tambajotram-pifandraisana iraisam-pirenena tsy miankina amin'ny Internet izay mikendry ny hahatonga ny tsena cryptocurrency ho azon'ny rehetra. Tsy mbola ao amin'ny Coinmarketcap io.
izao tontolo izao:
Cryptocurrency mifototra amin'ny teknolojia blockchain ary natao tamin'ny sehatra Ethereum ERC-20, izay hanana ny Wallet elektronika azy manokana. Tsy mbola ao amin'ny Coinmarketcap io.
Cryptocurrency izay maniry ny ho lasa fomba fandoavam-bola haingana, azo antoka ary mahomby. Ankoatry ny fampiroboroboana ny fikarohana momba ny FinTech Technologies ao amin'ny firenena. Tsy mbola ao amin'ny Coinmarketcap io.
Cryptocurrency mifototra amin'ny kaody loharano an'ny Litecoin ary natao hanatanterahana ny anjara asan'ny "maodely cryptoasset" hitarika ny fivoaran'ny ho avy. Tsy mbola ao amin'ny Coinmarketcap io.
Cryptocurrency izay te-ho fototry ny herin'ny fampahalalana manokana an'ny mpampiasa tsirairay amin'ny alàlan'ny sakana amin'ny fifanakalozana tsy mitonona anarana izay manodin-drakitra amin'ny alàlan'ny fangatahana itsinjaram-pahefana hampiasaina maimaim-poana. Tsy mbola ao amin'ny Coinmarketcap io.
Token Ethereum Shiliana voalohany izay mikasa ny hampanakaiky ny besinimaro ny haitao blockchain amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny fahalalana ny fampiasana mari-pamantarana sy ny fahalalana lalina momba ny crypto. Tsy mbola ao amin'ny Coinmarketcap io.
Cryptocurrency dia natolotry ny cryptocurrency 100% amerikana latina voalohany ary izy irery no teraka tamina tambajotra azo ampiharina sy azo ampiasaina, hampiasaina ho vola dizitaly, eo noho eo. Tsy mbola ao amin'ny Coinmarketcap io.
Cryptocurrency tohanan'ny emeralda Kolombia izay manome fifangaroana
fananana nomerika azo antoka tantanan'ny blockchain sy emeralda ara-batana Kolombia
amin'ny trano fitahirizam-piarovana an'ny orinasa boaty azo antoka. Tsy mbola ao amin'ny Coinmarketcap io.
Cryptocurrency noforonina hampiasaina ao anatin'ny "Trisquel Premium" Crypto Ecosystem, izay tontolo iainana eo amin'ny sehatry ny asa aman-draharaha anaovan'ny Cryptoeconomics sehatra iraisam-pirenena amin'ny fomba matihanina sy maharitra ary azo antoka ary mikendry ny hanabe ny olona haneho ny tena tanjony ny vola crypto. Tsy mbola ao amin'ny Coinmarketcap io.
Cryptocurrent itsinjaram-pahefana notantanin'ny olona, ​​notohanan'ny marimaritra iraisana sy komitin'ny mpandraharaha. Manantena izy fa hanova ny altruism amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ireo insentif ara-toekarena ao amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Tsy mbola ao amin'ny Coinmarketcap io.
Cryptocurrency niarahan'ny FinTech Division an'ny Cuba Ventures, Revolupay® sy ny sehatra fampindramam-bola CubaFIN, miaraka amin'ny fikasana hanao azy ho cryptocurrency manerantany, izay mifamatotra amin'ny vola fiat lehibe any Karaiba. Tsy mbola ao amin'ny Coinmarketcap io.
Cryptocurrency izay ahafahan'ny mpampiasa sy ny mpamorona manararaotra an'ity haitao mahery ity ho an'ny media sosialy, tranokala, bilaogy ary tranokala e-varotra. Ary noforonina izy io mba hialana amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny firenena tsy misy saribakoly. Tsy mbola ao amin'ny Coinmarketcap io.
Cryptocurrency izay natokana hanamafisana ny sehatra nasionaly amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana hekitara habanero dipoavatra. Izy io dia cryptoactive (vokatra fampiasam-bola) an'ny Amar Hidroponía izay mamela ny mpampiasa vola handray anjara amin'ny tombom-barotra azo avy amin'ny Production Production of Chile Habanero. Tsy mbola eo amin'ny Coinmarketcap.
Cryptocurrency notohanan'ny trano sy orinasa Meksikana, izay teraka tamin'ny tanjona fampiroboroboana ny varotra, ny kolontsaina, ny fomban-drazana ary ny fizahan-tany any Mexico ao anatiny sy ivelan'ny sisintaniny. Misy sehatry ny andry 7 (Real Estate, Technology, Commerce, fizahan-tany, Art, Startups ary fahasalamana) izay manohana ny TRADcoin, izay anolorana tetikasa tena izy sy azo tsapain-tanana ary ambonin'izany rehetra izany. Tsy mbola eo amin'ny Coinmarketcap.
Cryptocurrency izay manantena ho fomba fifanakalozana mahomby sy mahomby amin'ny fividianana sy fivarotana entana sy serivisy, hamahana ny olana amin'ny fiatombohana ny toeran'ny "Storage of Value" mankany amin'ny satan'ny "Fampiasana Transactional", amin'ny alàlan'ny fidirana ho mpandraharaha fifanakalozana ekena ary eken'ny orinasa sy orinasa eo an-toerana sy iraisam-pirenena. Tsy mbola eo amin'ny Coinmarketcap.
Cryptocurrency izay mitady ny fampiasana farany mora foana, amin'ny alàlan'ny fanomezana ny fahaizana ampiasaina ho singa tsena, fividianana, fivarotana, fitsitsiana, entana, serivisy, fifanakalozana ary fifanakalozana vola crypto hafa. Manantena ireo mpamorona azy fa ho lasa motera fampiroboroboana toekarena nomerika tsy miankina, mangarahara ary misokatra ho fandraisana anjara mivantana amin'ny olom-pirenena ao amin'ny firenena sy izao tontolo izao, izay ho sehatra fampandrosoana ny fananana crypto sy ny fanavaozana any Venezoela sy ny hafa. firenena vao misondrotra. Ao amin'ny Coinmarketcap io.
Cryptocurrency noforonina tamin'ny 2015 ary mifototra amin'ny kolontsaina Bitcoin, mikendry ny hitazona ny tsiambaratelo, ny hafainganan'ny fifanakalozana ary ny fahalalahana ara-bola. Ny tanjony dia ny hamorona cryptocurrency natokisana notohanan'ny olom-pirenena Venezoeliana. Ny filozofia Bolivarcoin dia ny fanarahana ny filamatra napetrak'ireo alitara hafa ary ampifanaraho amin'izy ireo ary ataovy izay hahalalan'ny mpampiasa azy amin'ny famoronana fampielezan-kevitra amin'ny media sosialy hitatitra ny tombontsoa sy ny fampiasana azy ireo. Manana a tranokala fampahalalana hafa y dia ao amin'ny Coinmarketcap.
Cryptocurrency izay miezaka manome valisoa ny fahafahan'ny olombelona, ​​miaraka amin'ny tahan'ny fifanakalozana tsy miova, ary ny taha avo indrindra azo antoka azo antoka amin'ny famatsiam-bola natao. Tadiavo ny fanamafisana ny toekarena manokana amin'ny alàlan'ny fampivoarana fitaovana vaovao mifototra amin'ny teknolojia efa misy, toy ny: E-varotra, fitrandrahana POS ary zavatra maro hafa izay hanampy ao anatin'ny Crypto Ecosystem an'ny sehatra misy anao, izay tsy mitsaha-mitombo. Tsy mbola eo amin'ny Coinmarketcap.
Cryptocurrency dia niforona ho vola nomerika niomerika tanteraka. Amin'ny maha fampandrosoana fampandrosoana misokatra azy dia mifantoka amin'ny fiainana manokana izy ary mampanantena fifanakalozana eo noho eo. Ny Crypto Ecosystem an'ny Onixcoin Project dia eo am-pamolavolana sy fanitarana tsy tapaka hanandramana ho lasa fomba fandoavam-bola itsinjaram-pahefana sy iraisampirenena ao Venezoela, amin'ny alàlan'ny fanolorana sehatra fampindramambola, sy ny REST API feno ho fampidirana ireo rafitra sy ny fampiasana betsaka indrindra an'ny blockchain, ankoatry ny tetikasa fandraharahana sy serivisy maro hafa mandritra ny taona 2018 sy 2019. Manana izy io tranokala fampahalalana hafa y dia ao amin'ny Coinmarketcap.
Cryptocurrency natao ho aina sy ho azon'ny mpampiasa azy amin'ny alàlan'ny fanaovana varotra amin'ny poketra am-pilaminana, haingana sy tsy misy mpanelanelana. Noforonina mba hanatsarana ny toekarem-pirenena, mifantoka amin'ny tsenan'ny fizahantany ao amin'ny firenena izay mety hitrandrahana betsaka, manomboka amin'ny fitsidihana tranonkala voajanahary tsara sy mahafinaritra eto amin'ny firenena ka mankafy hotely tsara indrindra. Tsy mbola eo amin'ny Coinmarketcap.
Cryptocurrency tohanan'ny WolfClover Company, izay manana sehatra dizitaly izay manampahaizana manokana amin'ny tontolon'ny vanim-potoana ara-bola vaovao, vola ary vola crypto, izay manana ekipa miasa sarobidy voaforon'ireo mpandraharaha Venezoeliana mitady hitombo ary manome fotoana ho an'ny hafa olona, ​​lasa fianakaviana lehibe manantena ny hisitraka ny fahalianan'ny mpikambana tsy mivadika sy tsy tapaka miaraka amin'ireo vokatra, serivisy, fahamendrehana ary filaminana azo antoka. Tsy mbola ao amin'ny Coinmarketcap io.
Misy traikefa hafa any Amerika Latina izany dia mbola eo am-pihetseham-po, fampandrosoana mialoha na fanandramana any amin'ny firenena sasany ao amin'ny faritra toy ny Cryptocurrency ankehitriny Petro avy any Venezoela, na ny Cryptocurrencies amin'ny ho avy Vara avy any Goatemalà, Kokicoin avy any Puerto Rico na E-Peso avy any Uruguay, izay azo antoka fa ho matotra ara-potoana ary hanana fahombiazana tsara any amin'ny fireneny ary mety any amin'ny faritra amin'ny fe-potoana antonony.
Tombanana fa ny Blockchain Technology sy ireo vokatra / tombontsoa mifandraika amin'izany, izay anisany Cryptocurrency malaza sy malaza indrindra, dia hitohy hiparitaka ary horaisina amin'ny ambaratonga rehetra, tsy amin'ny ambaratonga any Amerika Latina ihany fa manerantany., na ho an'ny daholobe na tsy miankina, ara-tsosialy ary ara-barotra, ankoatry ny hafa, mba hiteraka fiadanam-po sy fahasambarana lehibe indrindra azo atao amin'ireo fiarahamonina ampiasana azy.
Ary ny asa na anjara asan'ny rafitra ara-bola, teknolojia ary fanabeazana an'ny oniversite dia zava-dehibe mba hitomboan'ny fitomboan'ny fahalianana sy ny fampiasana ny vola crypto. Ho an'izany, ireo hetsika toy ny Meetups, Forums, Talks, Courses na Projects fikarohana dia ilaina mba hahazoana antoka fa tsy hihena ny fironana manoloana ny rafitra toekarena maneran-tany tamin'ny taonjato farany izay mbola mitohy eto amintsika.
Raha te hahafantatra sy hianatra bebe kokoa momba ny Teknolojia ara-bola, Blockchain ary Cryptocurrencies ianao dia mamporisika anao aho hamaky bebe kokoa, manomboka amin'ity rohy anatiny ity (Rafitra fiasa hafa ho an'ny fitrandrahana nomerika) ary ity ivelany (Voambolana momba ny Blockchain sy Cryptocurrencies: The FinTech World).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » maro » Amerika Latina sy Espana: Tetikasa Blockchain miaraka amin'ny Cryptocurrencies